Are you experiencing any form of family violence? - International Alert
International AlertAre you experiencing any form of family violence?
Are you experiencing any form of family violence?
Family violence means violent, threatening or other behaviour byaperson that coerces or controlsafamily member or spouse/boyfriend/girlfriend.
It is often referred to as ‘gender-based violence’ and is any act perpetrated againstaperson’s will based on their gender.
It can also be abuse of children, between siblings, or violence against former partners.
Different types of gender-based violence are :
Physical violence: Hitting, slapping, kicking, punching, choking, cutting, burning, use of weapons, etc.
Emotional violence: Verbal abuse, threats, intimidation, humiliation, verbal harassment, forced isolation, unwanted attention, excessive jealousy, remarks or gestures or written words ofasexual and/or menacing nature, etc.
Social violence: Prevention from accessing education or work, unequal pay based on gender, denial of inheritance, prevention from using contraceptives, neglect of family responsibilities, etc.
Sexual violence: Sexual assault (unwanted sexual contact including kissing, fondling or touching of genitalia and buttocks, etc), rape (unwanted penetration of the vagina or anus with any body parts or objects), attempted rape, forced sex work, etc.
Harmful traditional practices: Forced abortion, early or forced marriage, stigmatisation of menstruation, etc.
If you would like to talk to somebody about the abuse you are experiencing, please contact one of the following civil society organisations for assistance:
Some of these organisations work across all states and regions, others are focused on specific states and regions. There is also support provided by the government through the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement.
You can contact these organisations from ALL states and regions:
Service: Counselling, psychosocial support, provide shelter and connect with case manager from MSWRR
Hotline number: 09 795706 265, 09 786 371 055
COVID-19 hotline: 09 459 206 201, 09 459 206 203, 09 459 206 209, 09 459 206 331
Service: Legal Consultation (free), mediation
National Hotline Number: 09 266 684 448, 09 266 684 449, 09 430 670 60
Service: Counselling, psychosocial support
Htwe Htwe Myint: 09 799623417; [email protected]
Service: Counselling, consultation by phone call for GBV
Naw Phay Waw: 09 517 1297
Naw Jue Jue Ni: 09 526 3320
Naw Aye Aye Hlaing: 09 500 7537
Khin Wine Chit: 09 458 598 722
Hnin Nwe: 09 796 839 776; 09 899 844 780
Daw Thuzar Tin: 09 951 986 070
Naw Eh Christ: 09 965 465 190
Daw Thandar Lin: 09 769 793 373
Find which organisations focus on your specific state/region:
From Chin state, please call one of the nationwide numbers.
Service: Healthcare services
Hkawn Naw: 09 769 484 651
Zin Ma Aye: 09 795 263 536
Sau Win: 09 448 610 370
Legal Clinic Myanmar (Myitkyina)
Contact person: 09 7919 7420
Kachin Baptist Convention and International Rescue Committee
Service: GBV support line (Monday to Friday, 8:30am-4pm)
Contact person: Myit Kyina: 09 777 463 346
Shingnip, Kachin Legal Aid Network Group
Contact person: Daw Htan Kai Hnaung: 09 400 056 609; U Hla Dwe: 09 978 507 208
Legal Clinic Myanmar (Loikaw)
Contact person: 09 407 376 736, 09 788 611 229
Community Partners International (CPI) (Myawaddy, Kawkerik, Hlaingbwe, Kyaineseikyi)
Service: Healthcare, counselling, psychosocial support
Contact person: Dr Khine Wai Wai Oo: 09 974 939 483, [email protected]
Legal Clinic Myanmar (Mawlamyaing)
Contact person: 09 456 391 059
Mon Women’s Organization (Mawlamyaing)
Service: Hotline, healthcare, counselling, psychosocial support
Contact person: Daw Win Win Chan Myae Aung (Nway Htwe Taw Yin Kwin): 09 255 802 167, 09 799 189 785, nwayhtwethawyinkhwin.inmyan[email protected]
Legal Clinic Myanmar (Rakhine)
Kyaut Phyu: 09 891 629 717
Sittwe: 09 250 883 064
International Rescue Committee (in communities and IDP camps)
Service: GBV support phone line (Monday to Friday, 8:30am-4pm)
Rakhine women living in Sittwe: 09 887 877 844
Rohingya women living in Sittwe: 09 887 877 833
Hotline for Minbya: 09 887 877 811
Rathedaung: 09 887 877 822
Legal Clinic Myanmar, Lashio
Contact person: 09 251 441 366
Northern Shan Joint Support Hotline Call Centre by International Rescue Committee, Women LEAD and Karuna Mission Social Solidarity
Service: Case management for GBV survivors, psycho-social support, safety plans and referrals for health, legal and safety services (ethnic languages available)
Contact person: 09 960 576 555
Contact person: Daw Tin Aye Kyi: 09 789 289 969
Paralegal for Human Rights
Contact person: Win Thawdar Swe: 09 796 146 155
Contact person: Mya Myo Thwe: 09 976 365 721
Real Light Institute
Contact person: Hnin Nandar Aung: 09 428 188 109
Shan state Women Organisation Network (SSWON)
Contact person: Daw Wah Wah Soe: 09 521 0302
Women and Peace Action Network (WAPAN)
Service: Counselling and legal consultation
Contact person: Daw Thandar Oo: 09 797 198 650
Contact person: Daw Khin Moe Moe: 09 521 0156
Pa O Women Union
Contact person: Nang Kyae Sin: 09 450 476 264
From Sagaing, please call one of the nationwide numbers.
From Thanintharyi, please call one of the nationwide numbers.
From Nay Pyi Taw, please call one of the nationwide numbers.
Contact person: 09 696 642 256
From Magway, please call one of the nationwide numbers.
Legal Clinic Myanmar (Chan Aye Tharzan Tsp)
Contact person: 09 798 673 014
Service: Psychosocial support
Contact person: Khin Cho: 09 785 305 747, [email protected]
Legal Clinic Myanmar (Hlaing Thar Yar)
Contact person: Hlaing Thar Yar: 09 469 919 126
Legal Clinic Myanmar (Sanchaung, Head office)
Contact person: Sanchaung: 09 450 048 660, 09 333 769 93, 09 333 769 94
Service: Counselling, legal consultation
Contact person: U Khin Zaw (Advocate): 09 253 225 151
Legal Clinic Myanmar (Pathein Township)
Contact person: 09 260 338 726
The government of Myanmar through the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement also provides support through dedicated hotline numbers in all states and regions:
Bago region: 09 889 900 077, 09 661 075 555, 09 770 677 000, 09 980 000 107
Chin state: 09 889 900 044, 09 661 045 555, 09 770 774 000, 09 980 000 104
Irrwaddy region: 09 889 911 144, 09 661 145 555, 09 770 770 011, 09 980 000 114
Kachin state: 09 889 900 011, 09 661 015 555, 09 770 771 000, 09 980 000 101
Kayah state: 09 889 900 022, 09 661 025 555, 09 770 772 000, 09 980 000 102
Kayin state: 09 889 900 033, 09 661 035 555, 09 770 773 000, 09 980 000 103
Magway region: 09 889 900 088, 09 661 085 555, 09 770 778 000, 09 980 000 108
Mandalay region: 09 889 900 088, 09 661 085 555, 09 770 778 000, 09 980 000 108
Mon state: 09 889 911 177, 09 661 105 555, 09 770 771 001, 09 980 000 117
Nay Pyi Taw: 09 889 911 155, 09 661 155 555, 09 770 770 099, 09 980 000 115
Rakhine state: 09 889 911 188, 09 661 115 555, 09 770 771 100, 09 980 000 118
Sagaing region: 09 889 900 055, 09 661 055 555, 09 770 775 000, 09 980 000 105
Shan state: 09 889 911 133, 09 661 135 555, 09 770 770 010, 09 980 000 113
Thanintharyi region: 09 889 900 066, 09 661 065 555, 09 770 776 000, 09 980 000 106
Yangon region: 09 889 911 122, 09 661 125 555, 09 770 770 001, 09 980 000 112
Head office: 09 889 911 166, 09 661 005 555, 09 770 770 100, 09 980 000 116
We gratefully acknowledge the use of communication materials developed by the Women’s Organizations Network of Myanmar in partnership with the Livelihoods and Food Security Fund.
 This definition is based on that of Dr Phyo Thiha and UNFPA Myanmar.
သင့်မိသားစုတွင်း အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပါသလား။
မိသားစုတွင်း အကြမ်းဖက်မှုဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ဦးက မိသားစုဝင်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ဇနီး/ခင်ပွန်း/သမီးရည်းစား ကို အတင်းအဓမ္မအကျပ်ကိုင်ပြီး ကြမ်းတမ်းစွာပြုမူခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအပြုအမူများ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအကြမ်းဖက်မှုမျိုးသည် ကျား၊မ ဖြစ်ခြင်းကို အခြေခံကာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲ ၎င်းအား ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပြုလုပ်သော ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်သည်။
ထိုအကြမ်းဖက်မှုများတွင် ကလေးသူငယ်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ မောင်နှစ်မအချင်းချင်း အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ ရည်းစား‌ဟောင်းကို အကြမ်းဖက်ခြင်း တို့လည်းပါဝင်သည်။
၁) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု – ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပါးရိုက်ခြင်း၊ ဆောင့်ကန်ခြင်း၊ တွန်းထုတ်ခြင်း၊ လက်သီးနှင့် ထိုးခြင်း၊ လည်ပင်းညှစ်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်း၊ လက်နက်ပစ္စည်းကိရိယာဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အသုံးပြု၍ ရိုက်နှက်ခြင်းများ
၂) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု – ဆဲရေးခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်အကျပ်ကိုင်ခြင်း၊ နောက်ယောင်ခံလိုက်၍ နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ယိသဲ့သဲ့စကားပြောခြင်း၊ ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်း၊ အရှက်ခွဲခြင်း၊ သားစုနှင့် ဆက်သွယ် ပြောဆိုခွင့် မပြုခြင်း၊ နာကျင်အောင်ပြုလုပ်မည်ဟု ခြောက်လှနခြင်း၊ ရင်းသီးသော အသုံးအနှုန်းများသုံးခြင်း၊ နှိမ်ချဆက်ဆံခြင်း၊ အလွန်အကျွံ့သဝန်တိုခြင်း၊ ခြေဟန်လက်ဟန်ဖြင့် သို့မဟုတ် စာဖြင့် မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ခြင်းများ
၃) လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု – ပညာသင်ခွင့်မရှိခြင်း၊ ၀င်ငွေရအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုခြင်း၊ ကျားမဖြစ်ခြင်းပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ခလစာ လျှော့ပေးခံရခြင်း၊ အမွေဆက်ခံခွင့် မရရှိခြင်း၊ သန္ဓေတားဆေးများ အသုံးပြုခွင့်မရခြင်း၊ မိသားစုအား တာဝန်ယူမှုမရှိခြင်းများ
၄) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု – လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်း (အလိုမတူဘဲ နမ်းရှုံ့ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါ နှင့် တင်ပါးများကို ထိခြင်း အပါအ၀င်)၊ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း (အလိုမတူဘဲ လိင်အင်္ဂါ သို့မဟုတ် စအိုတွင်းသို့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများနှင့်ထိုးသွင်းခြင်း)၊ အတင်းဓမ္မလိင်ဆက်ဆံစေခြင်း၊ အဓမ္မပြုကျင့်ရန် အားထုတ်ခြင်း၊ လိင်လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်ဖို့ စေခိုင်းခံရခြင်း
၅) အန္တရာယ်ရှိသော ရိုးရာအလေ့အထများ – ကာယကံရှင်၏ ဆန္ဒမပါပဲ အတင်းအကြပ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစေခြင်း၊ စောစီးစွာ သို့မဟုတ် အတင်းအကြပ် အိမ်ထောင်ချခြင်း၊ ဓမ္မတာရာသီလာခြင်းကို ရှက်စရာ သိက္ခာကျစရာဟု သတ်မှတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါရှင်းလင်းချက်များသည် ဒေါက်တာဖြိုးသီဟ နှင့် UNFPA Myanmar တို့၏ ရှင်းလင်းချက်များကို အခြေခံထားပါသည်။
သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မတရား အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရမှုတွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပြောပြချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ပါအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်။ အချို့အဖွဲ့အစည်းများသည် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အားလုံးတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အချို့က သတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း အကူအညီများ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ
တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် အားလုံးတွင် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးကူညီအားပေးခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးခြင်း၊ ယာယီနားခိုရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း
Hotline number: ၀၉ ၇၉၅ ၇၀၆ ၂၆၅/ ၀၉ ၇၈၆ ၃၇၁ ၀၅၅
COVID-19 hotline: ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၂၀၁/ ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၂၀၃/ ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၂၀၉/ ၀၉ ၄၅၉ ၂၀၆ ၃၃၁
အကြမ်းဖက်ခံရသော မိန်းကလေးများနှင့် နစ်နာသူ အမျိုးသမီးများအား (အခမဲ့) အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အကြံပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးခြင်း
National hotline number: ၀၉ ၂၆၆၆၈၄၄၄၈/ ၀၉ ၂၆၆၆၈၄၄၄၉/ ၀၉ ၄၃၀၆၇၀၆၀
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းနှင့် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်း
ဒေါ်ထွေးထွေးမြင့် ၀၉၇၉၉၆၂၃၄၁၇/ [email protected]
အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ကွန်ရက် (မြန်မာ)
ကိုဗစ်၁၉ ကာလအတွင်း ကျား၊မ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများခံနေရသည့် အမျိုးသမီးများကို တယ်လီဖုန်းဖြင့် အကြံပေးဆွေးနွေးပေးခြင်း
နော်ဖောဝေါ ၀၉ ၅၁၇၁၂၉၇
နော်ဂျူးဂျူးနီ ၀၉ ၅၂၆၃၃၂၀
နော်အေးအေးလှိုင် ၀၉ ၅၀၀၇၅၃၇
ဒေါ်ခင်ဝိုင်းချစ် ၀၉ ၄၅၈၅၉၈၇၂၂
ဒေါ်နှင်းနွယ် ၀၉ ၇၉၆၈၃၉၇၇၆/ ၀၉ ၈၉၉၈၄၄၇၈၀
ဒေါ်သူဇာတင် ၀၉ ၉၅၁ ၉၈၆ ၀၇၀
နော်အယ်ခရစ် ၀၉ ၉၆၅ ၄၆၅ ၁၉၀
ဒေါ်သန္တာလင်း ၀၉ ၇၆၉ ၇၉၃ ၃၇၃
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အသီးသီးတွင် မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ကူညီပံ့ပိုးနေလဲ ရှာကြည့်ပါ။
ချင်းပြည်နယ်အတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် ပေးထားသော နံပါတ်များထဲမှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ခေါင်နော်၊ ဇင်မာအေး၊စောဝင်း ၀၉၇၆၉၄၈၄၆၅၁/ ၀၉၇၉၅၂၆၃၅၃၆/ ၀၉၄၄၈၆၁၀၃၇၀/ ၀၉၄၅၄၆၂၀၆၇၉
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (မြစ်ကြီးနား)(this link will open inanew window)
အကြမ်းဖက်ခံရသော မိန်းကလေးများနှင့် နစ်နာသူအမျိုးသမီးများအား (အခမဲ့) အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးးတိုင်ပင် အကြံပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးခြင်း
ဂျဲန်ဒါအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ခေါ်ဆိုရန်ဖုန်းနံပါတ်
တနင်္လာ မှ သောကြာ (နံနက် ၈း၃၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီထိ
မြစ်ကြီးနား ၀၉ ၇၇၇ ၄၆၃ ၃၄၆
ဒေါ်ထန်ကိုင်နှောင်း၊ ဦးလှဒွဲ ၀၉၉၇၈၅၀၇၂၀၈
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (လွိုင်ကော်)
၀၉ ၄၀၇၃၇၆၇၃၆/ ၀၉ ၇၈၈၆၁၁၂၂၉
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (မော်လမြိုင်)(this link will open inanew window)
Hotline, ကျန်းမာရေး၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးခြင်း
ဒေါ်ဝင်းဝင်းချမ်းမြေ့အောင် (နွေးထွေးသောရင်ခွင် CSO) ၀၉၂၅၅၈၀၂၁၆၇/၀၉၇၉၉၁၈၉၇၈၅
အကြမ်းဖက်ခံရသော မိန်းကလေးများနှင့် နစ်နာသူအမျိုးသမီးများအား (အခမဲ့)အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးးတိုင်ပင် အကြံပေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးခြင်း
ကျောက်ဖြူ ၀၉ ၈၉၁၆၂၉၇၁၇
စစ်တွေ ၀၉ ၂၅၀၈၈၃၀၆၄
စစ်တွေမှ ရခိုင်လူမျိုများအတွက်၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၄၄
စစ်တွေမှ ရိုဟင်ဂျာများအတွက် ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၃၃
မင်းပြား Hotline ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၁၁
ရသေ့တောင် ၀၉ ၈၈၇၈၇၇၈၂၂
ကျားမ အခြေပြု ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအား အမှုစီမံခန့်ခွဲမှုပေးခြင်း၊ လူမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့၊ လုံခြုံမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ကျန်းမာရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် လွဲပြောင်းညွန်းပို့ပေးခြင်း
Hotline (တိုင်းရင်းသားဘာသာဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်) ၀၉ ၉၆၀၅၇၆၅၅၅
ဒေါ်ဝါဝါစိုး ၀၉ ၅၂၁၀၃၀၂
ဒေါ် သန္တာဦး ၀၉၇၉၇၁၉၈၆၅၀
အခမဲ့ ဥပ‌ဒေအကြံပေးခြင်းနှင့် ဖျန်ဖြေပေးခြင်း
ဒေါ်ခင်မိုးမိုး ၀၉ ၅၂၁၀၁၅၆
ဥပဒေအကြံပေးခြင်းနှင့် ယာယီနားခိုရာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း (ပအို့အမျိုးသမီးများ အတွက်သာ)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် ပေးထားသော နံပါတ်များထဲမှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် ပေးထားသော နံပါတ်များထဲမှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
နေပြည်တော်အတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် ပေးထားသော နံပါတ်များထဲမှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များအတွက် ပေးထားသော နံပါတ်များထဲမှ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်)
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (လှိုင်သာယာမြို့နယ်)
လှိုင်သာယာ ၀၉ ၄၉၉၁၉၁၂၆
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (စမ်းချောင်းမြို့နယ်)
စမ်းချောင်း ၀၉ ၄၅၀၀၄၈၆၆၀/ ၀၉ ၃၃၃၇၆၉၉၃/ ၀၉ ၃၃၃၇၆၉၉၄
အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်သော ဥပဒေဆိုင်ရာနစ်နာမှုများ နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကိုဖြေရှင်းပေးခြင်း
ဦးခင်ဇော် (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ) ၀၉ ၂၅၃၂၂၅၁၅၁
ဥပဒေရေးရာ ကုစားရေးအဖွဲ့ (ပုသိမ်မြို့)
နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ
တဆင့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၇၇/ ၀၉ ၆၆၁၀၇၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၆၇၇၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၇
ချင်းပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၄၄ / ၀၉ ၆၆၁၀၄၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၄၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၄
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၄၄ / ၀၉ ၆၆၁၁၄၅၅၅၅ / ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၁၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၄
ကချင်ပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၁၁/ ၀၉ ၆၆၁၀၁၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၁
ကယားပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၂၂/ ၀၉ ၆၆၁၀၂၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၂၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၂
ကရင်ပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၃၃/ ၀၉ ၆၆၁၀၃၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၃၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၃
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၈၈/ ၀၉ ၆၆၁၀၈၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၈၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၉၉/ ၀၉ ၆၆၁၀၉၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၉၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၉
မွန်ပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၇၇/ ၀၉ ၆၆၁၁၀၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၀၀၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၇
နေပြည်တော် ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၅၅/ ၀၉၆၆၁၁၅၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၉၉/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၅
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၈၈/ ၀၉ ၆၆၁၁၁၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၁၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၅၅/ ၀၉ ၆၆၁၀၅၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၅၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၅
ရှမ်းပြည်နယ် ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၃၃/ ၀၉ ၆၆၁၁၃၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၁၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၃
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၉၈၈၉၉၀၀၀၆၆/ ၀၉ ၆၆၁၀၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၆၀၀၀/ ၀၉၉၈၀၀၀၀၁၀၆
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၂၂/ ၀၉ ၆၆၁၁၂၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၀၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၂
ရုံးချုပ် ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၆၆/ ၀၉ ၆၆၁၀၀၅၅၅၅/ ၀၉၇၇၀၇၇၀၁၀၀/ ၀၉၉၈၀၀၀၀၁၁၆
သငျ့မိသားစုတှငျး အကွမျးဖကျမှု ပုံစံအမြိုးမြိုးကွုံတှနေ့ရေပါသလား။
မိသားစုတှငျး အကွမျးဖကျမှုဆိုသညျမှာ တဈစုံတဈဦးက မိသားစုဝငျတဈဦး သို့မဟုတျ ဇနီး/ခငျပှနျး/သမီးရညျးစား ကို အတငျးအဓမ်မအကပျြကိုငျပွီး ကွမျးတမျးစွှာပုမူခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျခွငျး သို့မဟုတျ အခွားအပွုအမူမြား ပွုလုပျခွငျး ဖွဈသညျ။
ထိုအကွမျးဖကျမှုမြိုးသညျ ကြား၊မ ဖွဈခွငျးကို အခွခေံကာ လူတဈဦးတဈယောကျ၏ စိတျဆန်ဒမပါဘဲ ၎င်းငျးအား ထိခိုကျနဈနာအောငျ ပွုလုပျသော ကြားမအခွပွေုအကွမျးဖကျမှု ဖွဈသညျ။
ထိုအကွမျးဖကျမှုမြားတှငျ ကလေးသူငယျမြားကို ညှငျးပနျးနှိပျစကျခွငျး၊ မောငျနှမအခငျြးခငျြး အနိုငျကငျြ့အကွမျးဖကျခွငျး၊ ရညျးစား‌ဟောငျးကို အကွမျးဖကျခွငျး တို့လညျးပါဝငျသညျ။
၁) ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှု – ရိုကျနှကျခွငျး၊ ပါးရိုကျခွငျး၊ ဆောငျ့ကနျခွငျး၊ တှနျးထုတျခွငျး၊ လကျသီးနှငျ့ ထိုးခွငျး၊ လညျပငျးညှဈခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးမြားကို ဖွတျတောကျခွငျး၊ မီးရှို့ခွငျး၊ လကျနကျပစ်စညျးကိရိယာဖွငျ့ ခွိမျးခွောကျခွငျး (သို့မဟုတျ) အသုံးပွု၍ ရိုကျနှကျခွငျးမြား
၂) စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှု – ဆဲရေးခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျအကပျြကိုငျခွငျး၊ နောကျယောငျခံလိုကျ၍ နှောကျယှကျခွငျး၊ ယိသဲ့သဲ့စကားပွောခွငျး၊ ပွဈတငျပွောဆိုခွငျး၊ အရှကျခှဲခွငျး၊ မိသားစုနှငျ့ ဆကျသှယျပွောဆိုခှငျ့ မပွုခွငျး၊ နာကငျြအောငျပွုလုပျမညျဟု ခွောကျလှနျ့ခွငျး၊ ရငျးသီးသော အသုံးအနှုနျးမြားသုံးခွငျး၊ နှိမျခဆြကျဆံခွငျး၊ အလှနျအကြှံ့သဝနျတိုခွငျး၊ ခွဟေနျလကျဟနျဖွငျ့ သို့မဟုတျ စာဖွငျ့ မဖှယျမရာ ပွုလုပျခွငျးမြား
၃) လူမှုရေးပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှု – ပညာသငျခှငျ့မရှိခွငျး၊ ၀ငျငှရေအလုပျလုပျကိုငျခှငျ့မပွုခွငျး၊ ကြားမဖွဈခွငျးပျေါအခွခေံ၍ လုပျခလစာ လြှော့ပေးခံရခွငျး၊ အမှဆေကျခံခှငျ့ မရရှိခွငျး၊ သန်ဓတေားဆေးမြား အသုံးပွုခှငျ့မရခွငျး၊ မိသားစုအား တာဝနျယူမှုမရှိခွငျးမြား
၄) လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှု – လိငျပိုငျးဆိုငျရာလကျရောကျကြူးလှနျခွငျး (အလိုမတူဘဲ နမျးရှုံ့ခွငျး၊ ကိုငျတှယျပှတျသပျခွငျး၊ လိငျအင်ျဂါ နှငျ့ တငျပါးမြားကို ထိခွငျး အပါအ၀ငျ)၊ မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး (အလိုမတူဘဲ လိငျအင်ျဂါ သို့မဟုတျ စအိုတှငျးသို့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျး သို့မဟုတျ ပစ်စညျးမြားနှငျ့ထိုးသှငျးခွငျး)၊ အတငျးဓမ်မလိငျဆကျဆံစခွေငျး၊ အဓမ်မပွုကငျြ့ရနျ အားထုတျခွငျး၊ လိငျလုပျငနျးတှမှော လုပျကိုငျဖို့ စခေိုငျးခံရခွငျး
၅) အန်တရာယျရှိသော ရိုးရာအလအေ့ထမြား – ကာယကံရှငျ၏ ဆန်ဒမပါပဲ အတငျးအကွပျ ကိုယျဝနျဖကျြခစြခွေငျး၊ စောစီးစှာ သို့မဟုတျ အတငျးအကွပျ အိမျထောငျခခြွငျး၊ ဓမ်မတာရာသီလာခွငျးကို ရှကျစရာ သိက်ခာကစြရာဟု သတျမှတျခွငျးတို့ဖွဈပါတယျ။
အထကျပါရှငျးလငျးခကျြမြားသညျ ‌‌ဒေါကျတွာဖိုးသီဟ နှငျ့ UNFPA Myanmar တို့၏ ရှငျးလငျးခကျြမြားကို အခွခေံထားပါသညျ။
သငျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ မတရား အနိုငျကငျြ့စျောကားခံရမှုတှကေို တဈစုံတဈယောကျကို ပွောပွခငျြတယျဆိုရငျ အောကျပါအရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားထံမှ အကူအညီရယူနိုငျပါတယျ။ အခြို့အဖှဲ့အစညျးမြားသညျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျအားလုံးတှငျ လုပျကိုငျလကျြရှိပွီး အခြို့က သတျမှတျထားသော ဧရိယာမြားတှငျ လုပျကိုငျလကျြရှိသညျ။ လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ၀နျကွီးဌာနကလညျး အကူအညီမြား ပံ့ပိုးဆောငျရှကျပေးလကျြရှိပါသညျ။
တိုငျးနှငျ့ ပွညျနယျအလိုကျ ဝနျဆောငျမှုပေးသော အဖှဲ့အစညျးမြား နှငျ့ ရရှိနိုငျသော ဝနျဆောငျမှုမြား
တိုငျးဒသေကွီး နှငျ့ ပွညျနယျ အားလုံးတှငျ ရှိသော အဖှဲ့အစညျးအသီးသီးနှငျ့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးကူညီအားပေးခွငျး၊ ဥပဒဆေိုငျရာ အကူအညီမြားပေးခွငျး၊ ယာယီနားခိုရာ ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျး၊ လူမှုဝနျထမျး၊ ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာနတို့နှငျ့ခြိတျဆကျပေးခွငျး
အကွမျးဖကျခံရသော မိနျးကလေးမြားနှငျ့ နဈနာသူ အမြိုးသမီးမြားအား (အခမဲ့) အမှုလိုကျပါဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးတိုငျပငျအကွံပေးခွငျး၊ ညှိနှိုငျးခွငျးနှငျ့ ကွားဝငျဖွရှေငျးပေးခွငျး
စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ပံ့ပိုးမှုပေးခွငျးနှငျ့ နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးပေးခွငျး
ဒျေါထှေးထှေးမွငျ့ ၀၉၇၉၉၆၂၃၄၁၇/ [email protected]
အမြိုးသမီးအဖှဲ့မြား ကှနျရကျ (မွနျမာ)
ကိုဗဈ၁၉ ကာလအတှငျး ကြား၊မ အခွပွေုအကွမျးဖကျမှုမြားခံနရေသညျ့ အမြိုးသမီးမြားကို တယျလီဖုနျးဖွငျ့ အကွံပေးဆှေးနှေးပေးခွငျး
နျောဖောဝေါ ၀၉ ၅၁၇၁၂၉၇
နျောဂြူးဂြူးနီ ၀၉ ၅၂၆၃၃၂၀
နျောအေးအေးလှိုငျ ၀၉ ၅၀၀၇၅၃၇
ဒျေါခငျဝိုငျးခဈြ ၀၉ ၄၅၈၅၉၈၇၂၂
ဒျေါနှငျးနှယျ ၀၉ ၇၉၆၈၃၉၇၇၆/ ၀၉ ၈၉၉၈၄၄၇၈၀
ဒျေါသူဇာတငျ ၀၉ ၉၅၁ ၉၈၆ ၀၇၀
နျောအယျခရဈ ၀၉ ၉၆၅ ၄၆၅ ၁၉၀
ဒျေါသန်တာလငျး ၀၉ ၇၆၉ ၇၉၃ ၃၇၃
တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျ အသီးသီးတှငျ မညျသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမြား ကူညီပံ့ပိုးနလေဲ ရှာကွညျ့ပါ။
ခငျြးပွညျနယျအတှကျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျမြားအတှကျ ပေးထားသော ဖုနျးနံပါတျမြားအသုံးပွုပွီး ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ
ခေါငျနျော၊ ဇငျမာအေး၊စောဝငျး ၀၉၇၆၉၄၈၄၆၅၁/ ၀၉၇၉၅၂၆၃၅၃၆/ ၀၉၄၄၈၆၁၀၃၇၀/ ၀၉၄၅၄၆၂၀၆၇၉
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (မွဈကွီးနား)
အကွမျးဖကျခံရသော မိနျးကလေးမြားနှငျ့ နဈနာသူအမြိုးသမီးမြားအား (အခမဲ့) အမှုလိုကျပါဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာဆှေးနှေးးတိုငျပငျ အကွံပေးခွငျး၊ ညှိနှိုငျးခွငျးနှငျ့ကွားဝငျဖွရှေငျးပေးခွငျး
ဂြဲနျဒါအခွပွေု အကွမျးဖကျမှုမြားအတှကျ ချေါဆိုရနျဖုနျးနံပါတျ
တနင်ျလာ မှ သောကွာ (နံနကျ ၈း၃၀ မှ ညနေ ၄း၀၀ နာရီထိ
မွဈကွီးနား ၀၉ ၇၇၇ ၄၆၃ ၃၄၆
ဒျေါထနျကိုငျနှောငျး၊ ဦးလှဒှဲ ၀၉၉၇၈၅၀၇၂၀၈
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (လှိုငျကျော)
Community Partners International (CPI) (ကော့ကရိတျ၊ ကွာအငျးဆိပျကွီး၊ လှိုငျးဘှဲ့၊ မွဝတီ)
ကနျြးမာရေးဝနျဆောငျမှုမြား၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပံ့ပိုးပေးခွငျးနှငျ့ နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးပေးခွငျး
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (မျောလမွိုငျ)
Hotline, ကနျြးမာရေး၊ နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးပေးခွငျးနှငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပံ့ပိုးမှုပေးခွငျးး
ဒျေါဝငျးဝငျးခမျြးမွအေ့ောငျ (နှေးထှေးသောရငျခှငျ CSO) ၀၉၂၅၅၈၀၂၁၆၇/၀၉၇၉၉၁၈၉၇၈၅
အကွမျးဖကျခံရသော မိနျးကလေးမြားနှငျ့ နဈနာသူအမြိုးသမီးမြားအား (အခမဲ့)အမှုလိုကျပါဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာဆှေးနှေးးတိုငျပငျ အကွံပေးခွငျး၊ ညှိနှိုငျးခွငျးနှငျ့ကွားဝငျဖွရှေငျးပေးခွငျး
ကြောကျဖွူ ၀၉ ၈၉၁၆၂၉၇၁၇
စဈတှေ ၀၉ ၂၅၀၈၈၃၀၆၄
စဈတှေ မှ ရခိုငျလူမြိုးမြားအတှကျ ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၄၄
စဈတှေ မှ ရိုဟငျဂြာမြားအတှကျ ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၃၃
မငျးပွား Hotline ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၁၁
ရသတေ့ောငျ ၀၉ ၈၈၇ ၈၇၇ ၈၁၁
အကွမျးဖကျခံရသော မိနျးကလေးမြားနှငျ့ နဈနာသူအမြိုးသမီးမြားအား (အခမဲ့) အမှုလိုကျပါဆောငျရှကျပေးခွငျး၊ ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာဆှေးနှေးးတိုငျပငျ အကွံပေးခွငျး၊ ညှိနှိုငျးခွငျးနှငျ့ကွားဝငျဖွရှေငျးပေးခွငျးင်း
ကြားမအခွပွေု ရှငျသနျကနျြရဈသူမြားအား အမှုစီမံခနျ့ခှဲမှုပေးခွငျး၊ လူမှုစိတျပိုငျးဆိုငျရာအထောကျအပံ့ပေးခွငျး၊ လုံခွုံမှုအစီအစဥျရေးဆှဲခွငျးနှငျ့ ကနျြးမာရေး၊ တရားစီရီရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးအတှကျ လှဲပွောငျးညှနျးပို့ခွငျး
Hotline (တိုငျးရငျးသားဘာသာဖွငျ့ဆကျသှယျနိုငျ) ၀၉ ၉၆၀၅၇၆၅၅၅
ဒျေါဝါဝါစိုး ၀၉ ၅၂၁၀၃၀၂
ဒျေါ သန်တာဦး ၀၉၇၉၇၁၉၈၆၅၀
အခမဲ့ ဥပ‌ဒအေကွံပေးခွငျးနှငျ့ ဖနျြဖွပေေးခွငျး
ဒျေါခငျမိုးမိုး ၀၉ ၅၂၁၀၁၅၆
ဥပဒအေကွံပေးခွငျးနှငျ့ ယာယီနားခိုရာ ဝနျဆောငျမှုပေးခွငျး (ပအို့အမြိုးသမီးမြား အတှကျသာ)
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီးအတှကျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျမြားအတှကျ ပေးထားသော နံပါတျမြားထဲမှ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီးအတှကျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျမြားအတှကျ ပေးထားသော နံပါတျမြားထဲမှ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ
နပွေညျတျောအတှကျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျမြားအတှကျ ပေးထားသော နံပါတျမြားထဲမှ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ
မကှေးတိုငျးဒသေကွီးအတှကျ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျမြားအတှကျ ပေးထားသော နံပါတျမြားထဲမှ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (ခမျြးအေးသာဇံမွို့နယျ)
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (လှိုငျသာယာမွို့နယျ)
လှိုငျသာယာ ၀၉ ၄၉၉၁၉၁၂၆
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (စမျးခြောငျးမွို့နယျ)
စမျးခြောငျး ၀၉ ၄၅၀၀၄၈၆၆၀/ ၀၉ ၃၃၃၇၆၉၉၃/ ၀၉ ၃၃၃၇၆၉၉၄
အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ပတျသကျသော ဥပဒဆေိုငျရာနဈနာမှုမြား နှငျ့ အကွမျးဖကျမှုမြားကိုဖွရှေငျးပေးခွငျး
ဦးခငျဇျော (တရားလှတျတျောရှနေ့ေ) ၀၉ ၂၅၃၂၂၅၁၅၁
ဥပဒရေေးရာ ကုစားရေးအဖှဲ့ (ပုသိမျမွို့)
နိုငျငံတျောအစိုးရကလညျး လူမှုဝနျထမျး ကယျဆယျရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာနမှ
တဆငျ့ ပွညျနယျနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီးအလိုကျ အောကျပါ ဖုနျးနံပါတျမြားဖွငျ့ ကူညီပံ့ပိုးပေးလကျြရှိပါသညျ။
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၇၇/ ၀၉ ၆၆၁၀၇၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၆၇၇၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၇
ခငျြးပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၄၄ / ၀၉ ၆၆၁၀၄၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၄၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၄
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၄၄ / ၀၉ ၆၆၁၁၄၅၅၅၅ / ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၁၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၄
ကခငျြပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၁၁/ ၀၉ ၆၆၁၀၁၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၁
ကယားပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၂၂/ ၀၉ ၆၆၁၀၂၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၂၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၂
ကရငျပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၃၃/ ၀၉ ၆၆၁၀၃၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၃၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၃
မကှေးတိုငျးဒသေကွီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၈၈/ ၀၉ ၆၆၁၀၈၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၈၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၈
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၉၉/ ၀၉ ၆၆၁၀၉၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၉၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၉
မှနျပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၇၇/ ၀၉ ၆၆၁၁၀၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၀၀၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၇
နပွေညျတျော ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၅၅/ ၀၉၆၆၁၁၅၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၉၉/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၅
ရခိုငျပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၈၈/ ၀၉ ၆၆၁၁၁၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၁၁၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၈
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ၀၉ ၈၈၉၉၀၀၀၅၅/ ၀၉ ၆၆၁၀၅၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၅၀၀၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၀၅
ရှမျးပွညျနယျ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၃၃/ ၀၉ ၆၆၁၁၃၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၁၀/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၃
တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ၀၉၈၈၉၉၀၀၀၆၆/ ၀၉ ၆၆၁၀၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၆၀၀၀/ ၀၉၉၈၀၀၀၀၁၀၆
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၂၂/ ၀၉ ၆၆၁၁၂၅၅၅၅/ ၀၉ ၇၇၀၇၇၀၀၀၁/ ၀၉ ၉၈၀၀၀၀၁၁၂
ရုံးခြုပျ ၀၉ ၈၈၉၉၁၁၁၆၆/ ၀၉ ၆၆၁၀၀၅၅၅၅/ ၀၉၇၇၀၇၇၀၁၀၀/ ၀၉၉၈၀၀၀၀၁၁၆